Kuongorora muSpanish nevhidhiyo yeiyo nyowani iPhone 7 | IPhone nhau
iPhone 7: kuongorora kwevhidhiyo uye kuongorora
Rimwe gore uye imwe iPhone yakaratidzwa. Tim Cook nekambani vakatora danho reBill Graham Civic Auditorium mazuva mashoma apfuura kutiratidza kwatiri mabheti avo kukwikwidza muchikamu chekutanga chemafoni panguva inotevera kosi. Hapana aive asina hanya.
Ose maviri kune rumwe rutivi uye kune rumwe, maonero nezve iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ari mune akawanda mapoinzi sezvaanosiyana. Pasina kuve modhi ine "s" muzita rayo, zvingave zvine musoro kuti gore rino tingadai takaona shanduko yakanyanyisa mukugadzirwa kwekunze kweiyi iPhone, asi zvirokwazvo uyu modhi une zvishoma zvishoma zvekuchinja pakati pechigadzirwa chakura uye chinhu chitsva chichauya gore rinouya.
1 Hazvina basa?
2 Ona ya jack
4 Mifananidzo yako, zvakadzama
Kana zviri zvekunze, sekutaura kwandaita, hapana shanduko dzakawanda. Dhizaini yacho ichave yakafanana kune avo vasina hunyanzvi muhunyanzvi hwekusiyanisa maPhones akasiyana zvichienderana nechinhu chimwe chete kana zviviri, iyo isingafanire kuve yekuzvuva dai yanga isiri iyo yeModel modhi ichiri kukura nehasha uchienzaniswa nemamwe ma terminals ane akafanana saizi saizi kubva kumakwikwi. Kune zvimwe zvese, icho chimiro chinhu chinoshanda mushe kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinacho
Tichienda mune zvakadzama, tinogona kusiyanisa iyo iPhone 6s kubva kune iyo iPhone 7 nekuti mabhendi ekumashure eantena haachapfuure nealuminium, asi panzvimbo pezvo tevera kukombama kwefuremu kuzvivhara zvirinani ivo pachavo. Zvakare nekuti iyo kamera ikozvino yakafukidzwa nealuminiumumu yemu iPhone muviri pachawo uye, hongu, neiyo nyowani nhema uye inopenya nhema nhema (Dema uye Jet Nhema, muChirungu). Ehezve, chenjera neiyo yekupedzisira, nekuti zvinoenderana neApple pachayo, zvinowanzoitika kukwikwidza neyakareruka.
Ona ya jack
Chikamu chemaboos uye cheers akatarisana neiyi iPhone yakatorwa ne3,5-millimeter odhiyo jack. Kana, pane kudaro, kusavapo kwake. Iyo iPhone 7 haina jack yekubatanidza yedu yenguva dzose ngowani, asi zvatsiviwa neumwe mutsara wezvipenga unopedzisa kuenzanisa nevamwe vavo kurudyi. Iwo maEarPods nyowani zvino anouya nemheni yekubatanidza nekuti, hongu, ichi chichava chiteshi chega chaunofanira kushandisa kune zvese pane yako iPhone. Izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kukanda mahedhifoni ako ekare mumarara, nekuti Apple inosanganisira Mheni kune 3,5mm jack adapter mubhokisi rechishandiso. Kana huropi hwako hwangoputika uye iwe usingazive kuti chii ichi chisarudzo chakaitwa naApple kubvisa chimwe chinhu sehunhu se "gomba" mumahedhifoni anobva, muchinyorwa chino tinotsanangura kuti nei kusavapo kwavo kusiri mutambo.
Chinhu chirimo mune kubvumirana kwemaonero chiri mukati Imwe yenyenyedzi maficha eiyi iPhone: kuramba kumvura, jecha uye guruva. Chero ani zvake anga aine yake iPhone munguva yakapfuura achange awana kutya kunotyisa uko kunogona kukukonzera kuti uzviwane uri mune imwe yeaya mamiriro uye kutya kwehupenyu hwe iPhone yako. Zvino, matemu matsva akachengeteka kubva pazvinobvira kupaza, kudhiza netsaona uye zvimwe zviitiko zveichi chimiro. Ive nekuchenjerera, nekuti izvi hazvireve kuti iwe unogona kugeza nayo, asi kuti yakagadzirirwa chete nechinangwa chekupa iyo iPhone imwe yekuwedzera dziviriro. Muchokwadi, Apple yatonyevera kuti garandi haifukidze kukuvara kwemvura.
Mifananidzo yako, zvakadzama
Zvese zvatataura zvakanaka, asi iyo yakasimba chaizvo iyo iPhone 7 ndiyo kamera. Zvagara zvichitaurwa kuti iyo iPhone ine imwe yeakanakisa makamera pamusika, ichipa zvinoshamisa mhedzisiro kana ichienzaniswa nezvinotsanangurwa nevamwe vanogadzira. Iyi iPhone hachisi chinhu asi chirevo pane ino poindi, uko kutaurwa pasina marara kunowana mhedzisiro inoshamisa. Kutenda kune nyowani f / 1.8 kuzarura uye iyo nyowani ina-LED mwenje, mifananidzo mune yakaderera mwenje mamiriro ichave iri nani kupfuura nakare kose. Saizvozvo, iwo mavara aanotora pasi peyakajairika mamiriro akatendeka kune izvo zvatinoona muchokwadi.
Kekutanga nguva yatinoona mune ino modhi iyo yakavakirwa-mukati kuomarara kudzikama, Nhau huru kunyanya kune vanoda vhidhiyo, vanozoona kuti hunhu hwavo hunovandudzika zvakanyanya. Kunyangwe iyo yakasarudzika modhi yeavo vanoda kuwana zvakanakisa kubva mukamera icharamba iri iyo yekuwedzera, panguva ino iyo 4,7-inch terminal zvakare inoita basa rakanaka kwazvo.
Pakupedzisira, mushure mekumirira kwenguva yakareba yekutambudzika, Apple inosiya 16GB yekuchengetera base. Hatina kukwanisa kunyatsofara. Kunyangwe iyo musiyano wekuchengetedza neye inotevera yepamusoro modhi ichiri yakakura (128GB), kune vazhinji vashandisi 32GB ichave yakakwana.
Saka kuti zvese zvaunochengetera mune iwo 32GB (kana iwo awasarudza) anoshanda seMabasa anoda, iyi iPhone inouya neA10 processor uye M10 koprocessor Izvo, pasina kuenda mune zvehunyanzvi ruzivo, zvichaita kuti chishandiso "chibhururuke." Izvo zvinoitawo kuti ibudirire, uye izvo ndezvekuti Apple inofungidzira kuwedzera mukuzvimirira kweiyo iPhone 7 mumaawa anenge maviri achienzaniswa nema6. Zvinogona kunge zvisinganzwike sechibvumirano chikuru, asi isu tese tinoziva kuti miniti yega kuverenga.
Apple inoramba ichitora mukana mukuru weiyo 3D Kubata uye iyo Taptic Injini mune iyi modhi. Izvo hazvisi chete zviito zviripo zvekuita zvinoenderana nekumanikidza kwatinoita pachiratidziri, asi, bhatani idzva rekutanga kana «Imba» inomira kushanda sezvayakaita kusvika zvino kuisa ino diki mota mukati mayo. Mune mamwe mazwi, zvichaonekwa kwauri kuti urikudzvanya pazviri, asi muchokwadi zvese kutandara.
Mutsva Nhema uye Jet Nhema mavara
32GB base yekuchengetera
Kuwedzera kwemutengo pane ese mamodheru
Kubvisa odhiyo jack kunogona kukurumidza kune vamwe vashandisi
Kudzokorora kwe: Luis del Barco
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » iPhone 7: kuongorora kwevhidhiyo uye kuongorora
Ndatenda zvikuru, une rombo rakanaka kuva naro izvozvi, ndiri kurimirira kuti risvike kwandiri, nenzira iyo vhidhiyo inoitwa muValladolid ini ndinobva kuPalencia.
Oz: Broken Kingdom, mutambo wakaratidzwa mune yakakosha yeiyo iPhone 7, inosvika kuApp Store
Iyo nyowani Smart Bhatiri Nyaya yeiyo iPhone 7 inopa 26% yakawanda kubhadharisa